Oppo Find X dia mivoaka amin'ny TENAA haingana | Androidsis
Oppo Find X dia mivoaka haingana ao amin'ny TENAA
Oppo dia efa hanambara ny Oppo Find X, ny sainam-pireneny manaraka izay haseho amin'ny 19 Jona amin'ny hetsika manokana karakarain'ny orinasa any Paris, France. Vao haingana no nivoaka tamina TENAA ity fitaovana ity tamin'ny fomba fohy satria, na dia nipoitra tao amin'ny tranokala ofisialy ora vitsivitsy aza ny fampahalalana momba ny mampiavaka azy sy ny pitsopitsony ara-teknika azy, dia nesorina io data io, manome hadisoana rehefa niditra ny URL nomena teo am-piandohana.
Araka ny voalazan'ny mpandrindra sy mpanamarina sinoa, ary ny antsipirihany hafa navoaka sy naely nandritra ny herinandro maromaro, Ny Find X dia miaraka amina toetra mifaninana tena mendrika avo lenta izany, tsy isalasalana, dia hiady amin'ireo mobiles sarotra indrindra amin'ny orinasa hafa. Mampahafantatra anao izahay!
Raha ny angom-baovao navoaka, Ny Oppo Find X dia misy karazany roa: PAFM00 y PAFT00. Izy io koa dia mametraka ny efijery AMOLED diagonal 6.4-inch izay voalaza fa mety hitondra mpamaky rantsan-tànana eo ambaniny, teknolojia hitantsika voalohany tao amin'ny Vivo X20 Plus natolotra tamin'ny faran'ny volana janoary. Ho fanampin'izany, Izy io dia miaraka amina processeur valo-core amin'ny hafainganana 2.8GHz, isa matetika izay manondro fa izy no Qualcomm's Snapdragon 845 satria ny tsaho samihafa dia efa nitaky. Izy io koa dia manana RAM 8GB, 64 / 128GB habaka fitehirizana anatiny miaraka amin'ny fanohanana fanitarana amin'ny alàlan'ny karatra microSD, ary bateria 3.645mAh miaraka amin'ny fanohanana famandrihana haingana noho ny port USB Type-C izay ampiarahiny.
Amin'ny lafiny iray, Izy io dia manana sensor sary aoriana roa misy ny 20MP + 16MP izay mety ho tonga miaraka amin'ny Optical Zoom 5x, mitantana ny Android Oreo ho rafitra fiasa miaraka amin'ny ColorOS, mirefy 156.7 x 74.3 x 9.4mm, ary milanja 186 grama.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Oppo Find X dia mivoaka haingana ao amin'ny TENAA
MSI dia handefa rindrambaiko ahafahantsika mankafy lalao Android amin'ny PC